माधव नेपालको पोलिटिक्स सिद्दिसक्यो : ओली « रिपोर्टर्स नेपाल
माधव नेपालको पोलिटिक्स सिद्दिसक्यो : ओली
काठमाडौं, ११ भदौ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल र प्रचण्डह हिरोमात्रै नभएर सुपर स्पाईडर म्यान नै हो नि भन्दै व्यंग्य हानेका छन् । आज राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । पत्रकार धमलाले माधव नेपाल त हिरो हुनुभयो नि ? भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने,
उनले माधव नेपालले पार्टी फुटाएको कुरालाई मान्न नसकिने पनि टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, यो असंवैधानिक छ, गैरकानूनी छ । जालझेलपूर्ण छ । षड्यन्त्रपूर्वक छ ।” उनले माधव नेपाललाई आफूले पेलेको र हेपेको भन्नुपनि गलत भएको बताए । पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा पराजित हुँदापनि माधव नेपाललाई दोस्रो पोजिसनमा राखिएको उनको भनाई थियो ।
उनले माधव नेपालको पोलिटिक्स सिद्दिसकेको पनि दाबी गरे । प्रचण्डले माधव नेपाल त हिरो भनेर भन्नुभएको छ नि ? भनेर पत्रकार धमलाले सोधेको प्रश्न्मा उनले भने, हो, प्रचण्ड एक नम्बरको हिरो, माधव नेपाल दुई नम्बरको हिरो । उहाँहरु त स्पाईडर म्यान हो ।”
महाधिवेशनमा म पनि उम्मेद्धवारी दिन्छु, तर कुन पदमा भनेर पछि भनौंला : रमेश लेखक (भिडिओसहित)
प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशन हुने
कुल आचार्यको घोषणा : ‘कुमार पन्तजीले मेरो घरमै गएर अबको अध्यक्ष म कुल दाईलाई देख्न चाहन्छु भनिसक्नुभएको छ’ (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ११ असोज । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेद्धवारी घोषणा गरेका
प्रधानमन्त्री देउवा असफल हुनुभयो भन्नुजस्तो ठूलो हाँस्यास्पद अर्को केही हुँदैन् : यादव (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ११ असोज । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका शीर्ष नेता तथा पूर्वमन्त्री राजकिशोर यादवले अहिलेको
बुद्ध एयरको विमान दुर्घटनाबाट जोगियो, पाङ्ग्रा नखोलिंदा २ घन्टा आकाशमै फन्को
काठमाडौं, ११ असोज । बुद्ध एयरको विमान दुर्घटनाबाट जोगिएको छ । काठमाडौंबाट विराटनगरका लागि उडेको
कर्ण थापाको प्रतिप्रश्न : भीम रावललाई सुदुरपश्चिममा हामीले किन सिध्याउने ? (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ११ असोज । नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापाले आफूहरुले उपाध्यक्ष